ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ကွာရှင်းမြှောက်လြယ္ကူပြီးနောက် Younger တို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့
ကွာရှင်းမြှောက်လြယ္ကူပြီးနောက် Younger တို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: သြဂုတ်. 06 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်အသက်အရွယ်ကွာဟမှုကိုနောက်တဖန်မလူသုံးမများသောဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါသည်. သို့သော်, အချို့သောအုပ်စုများမှပိုင်ဆိုင်လူတွေပိုပြီးမကြာခဏအခြားသူများထက်ထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရ. ဥပမာအားဖြင့်, ထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုအရ မင်္ဂလာဆောင်နှင့်မိသားစုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, ကွာရှင်းယောက်ျားချိန်းတွေ့ဖို့ပိုများပါတယ်နှင့်အမျိုးသမီးသူတို့ကိုထက်မျ​​ားစွာငယ်ရွယ်သောနောက်အိမ်ထောင်ပြုရန်.
– ကွာရှင်းပြီးနောက်, အများစုကိုအမျိုးသားတွေ recover လုပ်ဖို့အချိန်အများကြီးလိုအပ်; သူတို့ပြီးသားစိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်သကဲ့သို့, သူတို့နိမ့်ဆုံးစိတ်ခံစားမှုဝန်စည်စလယ်နှင့်အတူနေ့စွဲအမျိုးသမီးများအတွက်ပိုနှစ်သက်. ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး, လျော့နည်းချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံကြောင့်, ယေဘုယျအားဖြင့်လျော့နည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်စည်စလယ်သယ်.
– ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးအခြေချပြီးမိသားစုရှိသည်လူတို့ကိုနှိပ်နည်းပါးသွား. သူတို့ကအများအားဖြင့်အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်. ထက်ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းပိုစဉ်းစား; သူတို့ကတခဏခြင်းတွင်နေထိုင်သောကိုချစ်. အလိုအလျှောက်အဘယ်သူမျှမအစီအစဉ်ကိုထားရှိခြင်းသည်လင်ကွာသောယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့ဘို့ပိုပြီးပျော်စရာကို.
– ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးအထင်ကြီးဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူဒါဟာင်. သူတို့ရဲ့ 40 ရဲ့ကွာရှင်းယောက်ျား, 50'' ကိုယ့်သို့မဟုတ် 60 ရဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့အံ့သြဖွယ်သောအရပ်တို့ကိုမိမိတို့ငယ်ရွယ်မိတ်ဖက်ယူဖို့လုံလောက်တဲ့ပိုက်ဆံရှိ (မိန်းကလေး) ဖူး, သူတို့ရတဲ့၏အိပ်မက်ကိုမြင်မက်ဘယ်တော့မှလက်ဆောင်တွေဝယ်ကြနဲ့သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေး (များသောအားဖြင့်မိုက်သူများဖြစ်ကြ၏သော) ကြီးမြတ်ရင့်ကျက်နှင့်အတူ. ဤအပြုအမူမကြာခဏလူငယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ရေရှည်တည်တံ့သောစိတ်စွဲမှတ်စေရန်လုံလောက်သောများမှာ.
အပေါ်မှာဆွေးနွေးထားတဲ့အားလုံးအချက်တစ်လင်ကွာသောယောက်ျားသည်သူ့ကိုထက်မျ​​ားစွာငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးတစ်ဦးချိန်းတွေ့ကြရန်ဆုံးဖြတ်သည်သည့်အခါကစားရန်အချို့သောအခန်းကဏ္ဍရှိသည်နေစဉ်, လူ၏ထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ်မှုနောက်ကွယ်တွင်အခြားလက်တွေ့ကျတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိစေခြင်းငှါ. ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အသက်အရွယ်အုပ်စုမည်သူမဆိုမတှေ့နိုငျလို့အငယ်မိန်းမတို့အဘို့ရှာဖွေစတင်သောသူရှိပါတယ်. စာရင်းအင်း ဆက်ဆံရေးတွင်ထိုလူကိုအကြားသောအခါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အများဆုံးကွာရှင်းနေရာယူထုတ်ဖေါ် 53 နှင့် 72 အသက်အရွယ်အနှစ်; ဤအသက်အရွယ်အုပ်စုပိုင်အလွန်နည်းပါးသည်အမျိုးသမီးများတစ်ကိုယ်ရေနေ.
ကွာရှင်း? တစ်ဦးအသက်ငယ်သောမိန်းမချိန်းတွေ့? စိတ်ထဲတွင်ဤအမှုအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်
– သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သင်တို့ပတ်လည်အငယ်ဆုံးအခန်းမဟုတ်သိတယ်; ဒါကြောင့်, သင်တဦးတည်းဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့မကြိုးစားပါဘူး. သင်၌သက်သာမဟုတ်အရောင်များကိုမဝတ်ပါနဲ့; သာမန်အားဖြင့်လက်ရှိမျိုးဆက်ယောက်ျားတွေပြုသောအရာတို့ကိုလည်းမပြုပါ; သင်ဆဲရုံနဲ့မလုံလောက်ခံ့ဖြစ်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာအောင်မပါဘူး. ဤသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့်မိန်းမအတွက်ကြီးမားတဲ့ turnoffs များမှာ, ငယ်ရွယ်သို့မဟုတ်အသက်ကြီး.
– သင်သည်သင်၏အသက်အရွယ်၏အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆက်ဆံကြပါပြီလိုသည်အတိုင်းသင့်ရဲ့နုပျိုမိတ်ဖက်နည်းတူဆက်ဆံပါ. အကယ်. သင်သည်အသက်အရွယ်ကွာဟမှုအကြောင်းကိုသိသောသူဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်, ဆက်ဆံရေးအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်.
– သင်သည်ကျိန်းသေသင့်အသက်တာ၌အသစ်သောမိန်းမအဘို့အလက်ဆောင်တွေဝယ်နိုင်, ဒါပေမယ့်သင်ကမင်းဘယ်တော့မှမပေးသင့်. သင်ငွေသား၏သိပ် flash ဆိုရင်, မိန်းမသည်သင့်ကိုချွတ်ပြသနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ကြောင်းထင်စေခြင်းငှါ,.
အသက်ကြီးသောသူတစ်ဦးအငယ်သောမိန်းမအကြားဆက်နွယ်မှုကိုမဆိုပုံမှန်ရင်ခုန်စရာကြားဆက်ဆံရေးကဲ့သို့သာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်. ဒါကြောင့်, တစ်လင်ကွာသောယောက်ျားသည်အဘယ်အပြစ်ကိုမျှရှိမယ့်သူတစ်ဦးလောက်ငယ်ရွယ်သောချိန်းတွေ့ဖို့ကြည့်လျှင်.